Wed, May 27, 2020 at 3:15pm
शनिबार, २१ आषाढ २०७६,	आहाखबर	5K
अभियोग १ : विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही बटुल्नुभयो । बाँकी सुधारका काम केही गर्नुभएन, बरु अहिलेसम्म त्यसैको ब्याज खाइरहनुभएको छ । तपाईंका काममा कसैले प्रश्न उठाए तर्कले जवाफ दिनुभन्दा लोडसेडिङ अन्त्य गरेकै विषयलाई ढाल बनाउनुहुन्छ । हालै संसद्मा तपाईंको कार्यशैलीबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि ‘मेराविरुद्ध घेराबन्दी भयो’ भनेर रुवाबासी गर्नुभयो, एलइडी खरिदमा प्राधिकरणमा अनियमितताको प्रश्न उठ्दा त आँसु नै झार्नुभयो ।
लोडसेडिङ अन्त्य त्यत्तिकै भएन होला नि । आन्तरिक रूपमा केही न केही सुधार त गर्नुपर्‍यो होला नि । बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको ब्याज खाइरहेको छ भन्ने पर्न सक्ला । तर, सँगसँगै संस्था सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र विज्ञहरूले समेत नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन, अझै सय वर्ष लोडसेडिङ रहिरहन्छ भन्थे नि । मैले लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्दा पनि दुई/तीन महिना त कसैले पत्याउँदै पत्याएनन् । तर, भयो नि ।
यो इस्यु नै हामीले उठाएको हो । यसमा पनि उल्टै हामीलाई चार्ज लगाइयो । सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा डबल चार्ज लिएर डेडिकेटेड लाइन लिन सकिने निर्णय बोर्डले गरेको रहेछ । ०७२ देखि यस्तो लाइन लिने ग्राहकहरूको संख्या करिब एक सय ८४ छ । उनीहरूको बिल त भइरहेकै थियो । तर, यहाँ प्रचार बिलिङ नै नगरी पैसा खायो भन्ने ढंगले गरियो । जसले ‘डेडिकेटेड लाइन लिएको छैन, लोडसेडिङमै बसेको छु’ भनेर दाबी गरे उनीहरूको मात्रै हाम्रा शाखाहरूले बिलिङ नगरेको रहेछ । म प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको ५/६ महिनापछि डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनमा केही ग्राहकले १४ घन्टा लोडसेडिङका वेला पनि २० देखि २४ घन्टासम्म बिजुली पाइरहेको थियो भन्ने जानकारी आएपछि छानबिन गर्न थाल्यौँ र बिलिङ पनि गर्न थाल्यौँ । त्यसपछि हो नि यो विषय उठेको ।
मसँग को चिढियो भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन । त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । किनभने लोलसेडिङ अन्त्य हुनु त देशकै लागि राम्रो हो । लोडसेडिङ अन्त्य कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । भारतबाट आयात गरेर मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा सत्य होइन । केही मान्छेले त अहिले पनि त्यही आरोप लगाउँछन् । भनुन्, ठीकै छ । म प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा नेपालले भारतबाट करिब १ अर्ब ७० करोड युनिट(१७सय गिगावाट आवर)बिजुली आयात गर्थ्यो । त्यसमा करिब १५ अर्ब खर्च हुन्थ्यो । जबकि, त्यो आर्थिक वर्षमा देशभर करिब ३७ सय गिगावाट आवर खपत हुन्थ्यो । देशभर खपत हुने विद्युत्को झन्डै ५० प्रतिशत त त्यतिवेला पनि भारतबाट आयात हुँदोरहेछ नि त । तर, दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ भइराखेकै थियो ।
म नेतृत्वमा आइसकेपछिको अवस्था के भयो हेर्नुस् न । आयात भइरहेको भन्दा धेरै आयात गर्न सक्ने अवस्था त हाम्रो थिएन । किनभने, संरचना त उनै थिए । बढीमा २०/३० मेगावाट आयात थपिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा हामीले करिब १ अर्ब ९० करोड युनिट (१९ सय गिगावाट आवर) भारतबाट आयात गरेका रहेछौँ । जुन करिब १८ अर्ब हाराहारीको हुन्छ । त्यसअघिको भन्दा करिब दुई/तीन अर्बको आयात बढेको हो । त्यसले मात्रै त्यत्रो १४ घन्टाको लोडसेडिङ अन्त्य त भएन होला नि ।
लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा दुई/तीन वटा कारण छन् । डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनहरूका कारण कसैले २४ घन्टा बिजुली पाइरहेका थिए, कसैले १४ घन्टा लोडसेडिङ पनि झेलिरहेका थिए । हामी आउनसाथ सबै उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलुका चार घन्टा डाउन गर्नुपर्ने नियम बनायौँ । यसले गर्दा सबैले २० घन्टा लाइन पाए, सबै खुसी पनि भए । हामीले गरेको अर्को सबैभन्दा ठूलो काम ‘डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ हो । त्यतिखेर लोडसेडिङ बढाउने त लोडसेडिङ नै थियो क्या । जति लोडसेडिङ बढाउँदै लग्यो त्यति लोडसेडिङ बढ्थ्यो । किनभने, इन्भटर त थपिएका थपियै थिए । ती त ब्ल्याक बक्स हुन् । जहाँ बत्ती बल्यो त्यहाँ इन्भटरहरू पनि एकैपटक चार्ज हुन थाल्थ्यो, आइरन पनि त्यही वेला, पानी तताउने पनि त्यही वेला हुन्थ्यो । त्यसले कति लोड बढाउँथ्यो होला अनुमान गर्नुस् त । हामीले सुरुमा काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यौँ । यहाँका सबै इन्भटर त आउट भए नि । २ सय मेगावाट त त्यहीँबाट जोगियो । क्रमशः ग्राहकको बानीमा परिवर्तन ल्यायौँ । प्राधिकरणसँग उनीहरू भावनात्मक रूपमा जोडिए । ‘यो चलाउनु हुन्न, विद्युत् जोगाउन यसो गर्नुपर्छ’ भनेर हामीले गरेका हरेक सर्कुलरमा उहाँहरूले साथ दिन थाल्नुभयो । हाम्रो ‘लस’ पूरै घट्यो । यसले ‘पिक डिमान्ड’ लाई ‘फ्ल्याट’ बनाइदियो । अर्को, ‘सप्लाई साइटमा जेनेरेसन प्लान्ट’हरू पनि व्यवस्थित गर्‍यौँ । त्यस्तै, रात दिन काम गरेर ‘इन्फास्ट्रक्चर’मा पनि अधिकतम सुधार ल्यायौँ ।
मान्छेले भन्न त भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमान हिरो भयो भनेर पनि भन्छन् । १० रुपैयाँ युनिटमा बिजुली किनेको छ भन्या छन् । हामीले आठ/१० वटा प्वाइन्टबाट बिजुली आयात गर्छौँ । बिहारबाट ल्याउने बिजुलीको रेट अलि महँगो छ । म आउनुभन्दा पहिला नै पाँच रुपैयाँ भारु थियो । अहिले ६ रुपैयाँ भारु छ । ११ केभीमा ल्याउँदा धेरै लाग्छ, ३३ केभीमा थोरै कम हुन्छ । एक सय ३२ मा अझ धेरै कम हुन्छ । ११ केभीमा त हामी आयात नै थोरै गर्छौं । त्यसैलाई हेरेर १० रुपैयाँ युनिटमा खरिद गर्‍यो भनेर आरोप लगाउँछन् । त्यसकारण महँगो बिजुली खरिद गरेको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणको एमडीले ६३ लाख त भत्ता नै बुझेको छ भन्ने कुरा मैले पनि पत्रिका पढेर थाहा पाएको हुँ । प्राधिकरणमा बैठक त धेरै नै हुन्छन्, बुझेकै पो हुँ कि भन्ने पनि लाग्यो (हाँसो) । प्राधिकरणको एमडीको जिम्मेवारी छुट्याएकै हुन्छ । म सरकारसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर आएको हुँ । मेरो ‘पर्फमेन्स इन्डिकेटर’हरू तोकिएका छन् । चार वर्षमा गर्ने कामको हरेक वर्ष केके गर्ने भन्ने ‘इन्डिकेटर’ छन् । मेरो ‘पर्फमेन्स’को रिजल्ट आएपछि यति प्रतिशत काम हुँदा यति प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भन्ने हुन्छ ।
प्राधिकरण भनेको यति ठूलो संस्था हो, जहाँ सबैका इन्ट्रेस्ट हुन्छन् । थरीथरी मान्छेका थरीथरी स्वार्थ हुन्छन् । कर्मचारीभित्र पनि सरुवादेखि कारबाहीसम्मका कुराहरू थिए । कतिपयलाई मेरा कारणले अप्ठ्यारो पनि परेको होला । लिडरसिपले रिस्क लिएर काम गरिरहेको हुन्छ । मेराविरुद्ध पनि मान्छे लागेका थिए । उनीहरू मैले भत्ताको ट्याक्स तिरेको रेकर्ड नै बोेकेर हिँडेका रै’छन् । ९/१० लाख त ट्याक्स तिरेको छ भनेपछि त्यसको १५ प्रतिशतले ‘ब्याक क्यालकुलेसन’ गर्दा ६३ लाख आयो । भनेपछि यसले ६३ लाख त बैठक भत्ता नै बुझेको रै’छ भन्ने बुझेछन् । भत्ता भनेको त बैठक भत्ता मात्रै होइन नि त । कन्ट्र्याक्टअनुसार मेरो पर्फमेन्सको मूल्यांकन गरेर आएको प्रोत्साहन भत्ता पनि हो नि । त्यो रकम पनि मेरो खातामा जान्छ । त्यसको ३५ प्रतिशत त मैले ट्याक्स तिर्नुपर्छ । ३५ प्रतिशत ट्याक्स काटेपछि कति भएको होला त्यो रकम ? बैठक भत्ता त कति पो होला र ? ६३ लाख भनेको छ, आश्चार्यजनक भइहाल्यो नि । त्यसैले यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । मैले यसअघि पनि यो कुरा स्पष्ट पारिसकेको छु । विद्युत् प्राधिकरण दूधले नुहाएको छ म भन्दिनँ । यसभित्र धेरै विकृति विसंगतिहरू थिए, अहिले पनि छन् । त्यसलाई अब घटाउँदै लैजाने हो । र, मैले प्राधिकरणमा पर्फमेन्स देखाउने पनि यहीँका कर्मचारीमार्फत हो । यहीँको रिसोर्स प्रयोग गरेर देखाउने हो । यहाँको रिसोर्सलाई अधिकतम प्रयोग र सदुपयोग गरेर आउटपुट दिने हो । भएको जनशक्तिबाट राम्रो छानेर नतिजा निकाल्ने हो । त्यो काम मैले गरेको छु ।
सबैभन्दा कमलो मनको मान्छे मै हुँ । एकदमै ‘एग्रेसिभ’ मान्छे होइन । सँगसँग कडा पनि हुँ । वास्तविक कुराहरूमा एकदमै लचिलोपन पनि देखाउनुपर्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्नेदेखि अप्ठ्यारो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संस्थाभित्रका कुराहरू यहीँभित्र छलफल गर्ने हो । हामीभित्रै छलफल गर्ने हो । केहीले चाहिँ हुँदै नभएका कुराहरू बाहिर लगेर ‘यस्तो भयो, त्यस्तो गर्‍यो’ भने । त्यो त राम्रो भएन । त्यस्तो छुट कसैलाई छैन । मलाई पनि छैन, बोर्ड मेम्बरलाई पनि छैन, कर्मचारीलाई पनि छैन । त्यस्तो छुट पायो भने त मान्छे साँढे भइहाल्छन् नि । अनि, संस्था कसरी चल्छ ? संस्था चलाउन त चेन अफ कमान्ड हुनुपर्‍यो नि । हिजो चेन अफ कमान्ड थिएन । चार÷पाँच ठाउँबाट चल्थ्यो । २० जना कर्मचारी चार/पाँच ठाउँबाट चल्न थाल्यो भने के हुन्छ संस्थाको हालत ? मैले भनेको डिएमडीले नमान्ने, डिएमडीले भनेको डाइरेक्टरले नमान्ने, डाइरेक्टरले भनेको शाखा प्रमुखले नमान्ने भएपछि के हुन्छ ? अब त्यो शाखा प्रमुख अन्तैबाट चल्न थालेपछि डाइरेक्टरलाई मान्छ पनि किन ? म चाहिँ त्यो चेन अफ कमान्ड मेन्टन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो । राम्रो मान्छे राम्रो ठाउँमा पर्नुपर्छ, ठीक मान्छेले ठीक ठाउँ पाउनुपर्छ र चेन अफ कमान्ड पनि मेन्टेन गर्नैपर्छ । त्यसलाई दश ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्नुहुँदैन । त्यसो हुन हुँदैन, हुन दिँदैन भनेको हुँ मैले ।
प्राधिकरणभित्रका मेरा शत्रुले काम गरिदियो भने मेरो सबभन्दा ठूलो सफलता हो भनेर बुझ्ने मान्छे हुँ म । कुनै पनि कर्मचारीले काम गर्ने भनेको मेरो सफलताका लागि हो । मैले काम गर्ने भनेको मन्त्रीको सफलताका लागि हो । मन्त्रीज्यूको सफलता भनेको प्रधानमन्त्रीको सफलता हो, सरकारको सफलता हो । सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सपोर्ट नभएको भए मैले कसरी काम गर्न सक्थेँ ? र, तल्लो लेबलबाट पनि सपोर्ट नपाईकन काम गर्न सक्दिनन् नि मैले । त्यसैले मैले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दिनँ । राम्रो मान्छे छ भने मेरो शत्रु नै भए पनि उसलाई मैले ठाउँमा राखेर काम गराएको छु । तर, जसले चाहिँ कामै गर्दैन, जहिले पनि ब्याकबाइटिङ मात्र गर्छ भने त्यस्तालाई जिम्मेवारी दिएर केही हुँदैन । उहाँहरू आरामसँग बसेकै राम्रो हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट